Wararka Maanta: Khamiis, May 10, 2012-Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dad shacab ah ka saaray Xarumo Wasaaradeed oo Muqdisho ku yaalla
Xarumaha dadka laga saaray ayaa waxaa ka mid ahaa: dhismaha wasaaraddii hore ee hiddaha iyo tacliinta sare oo ahayd goobo ganacsi iyo hoy, wasaaraddii hore ee qorsheynta Qaranka oo iyadana ahayd hoy iyo goob lagu iibiyo hubka iyo weliba wakaaladdii hore ee biyaha Xamar oo iyadana ay deggenaayeen dad ay ku jiraan qoxooti u dhashay Zinzibar.
"Dhismaayaasha Wasaaradaha dadka laga saaray waa kuwo loo diyaarinay inay ku shaqeeyaan wasaaradaha dowladda," ayuu yiri G/sare Khaliif Axmed Ereg oo ah taliyaha ciidamada nabadsugidda dowladda Soomaaliya ee gobolka Banaadir.
Boqolaal ganacsato iyo qoysas ah oo ku noolaa wasaaradahan ayaa laga saaray iyadoo dadka qaarkood ay howlgalkan ku tilmaameen mid aan horay loogu war-gelin laguna qasbay inay alaabooyinkooda kala baxaan halkaas.
"Ma jirto wax ogeysiis ah oo nala siiyay, waxaa saakay noo yimid ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM waxayna nagu qasbeen inaan halkaas ka guurno," ayuu yiri mid ka mid ah dadka ganacsiyada ku haysay wasaaraddii hore ee hiddaha iyo tacliinta sare.
Intii uu howgalku socday ayaa waxaa la hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo ganacsiga inta u dhexeysa wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare oo u dhexeysa isgoysyada Zope iyo KM4 iyo weliba wakaaladdii hore ee biyaha Xamar oo ku taalla isgoyska Banaadir.
Gaadiidka ciidamada AMISOM ayaa intii uu howlgalku socday ku sugnaa halkaas iyadoo meelaha qaarkood loo diidayay inay dadku si lug ah ku maraan, waxaana tani ay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladdu ay horay ugu baaqday in laga guuro xarumaha dowladda ee Muqdisho ku yaalla.